Kaydka Shirkadaha Safarka | Save A tareenka
Kaydka Shirkadaha Safarka
Home > Kaydka Shirkadaha Safarka
Kaydka Shirkadaha Safarka – Shirkadaha Safarka – Kaydka Safarka – Shirkadaha Kaydka Safarka
Tani ma aha bog caadi ah tan iyo markii aan ku jirno safarka safarka iyo tareennada safarka, waxaan sidoo kale go'aansanay inaan sameeyno bog firfircoon oo ku saabsan saamiyada safarka ee adduunka, sidaa darteed waxaad sidoo kale maal gashan kartaa shirkadaha socdaalka isla markaana aad kordhin kartaa hantidaada isla markaana aad isla markaaba kordhin kartaa heerkaaga farxad safarka shirkadahan safarada safarka.
Waxaan ka soo ururinay macluumaad qiimo leh oo ku saabsan shirkadaha safarka ee hoos ku xusan, sidaa adoo aqrinaya boggan, wax badan ayaad ka baran kartaa xogtooda, qiimaha saamiyada, iyo yoolalka, taas oo aakhirka hagaajin doonta fursadahaaga maalgashi faa'iido leh.
Jaantusyada Safarrada Safarka
Maxay yihiin macluumaadka shirkadaha saamiyada safarku u qalmaan, haddii aadan arki karin waxqabadkooda taariikhiga ah, markaa halkan waxaa ku yaal dhammaan calaamadaha saamiyada kor ku xusan, hadda jaantusyo taariikhi ah shirkad kasta iyo astaan ​​kasta.
Wararka Safarka Safarka
Xogtu way fiicantahay, laakiin waa maxay xogta bilaa macluumaadka iyo wararka keenaya, markaa waa kan qayb ka mid ah shirkadaha saamiyada safarka Travel wararka ka soo baxa nidaamyada warbixinta sarrifka saamiyada iyo sidoo kale xarumaha wararka madaxbannaan iyo falanqeeyayaasha. Tani waa xogtii ugu dambeysay ee la heli karo:
Haysashada Holdings Stock News
Wararka Shirkada Expedia Group
Wararka AirBnB Inc
Tilmaamaha Kaydka Tripadvisor
Safarka.com (Ctrip) Kooxda Hantida Wararka
Wararka Carnival Cruise Stock News
Wararka Royal Royal Stock
Ryanair Holdings Stock Wararka
Macluumaadka Suuq Weyn ee Suuqa
In kasta oo safarku yahay warshad weyn haddana waxaa sidoo kale saameyn ku leh tilmaamayaasha kale ee suuqa, sidaa darteed waxaan diyaarinay cutubkan macluumaadka suuq-geynta suuqa kooban, markaa waad arki kartaa tusmooyinka isweydaarsiga saamiyada adduunka oo dhan iyo sidoo kale macluumaad kale oo waaweyn oo aan kor ku soo sheegnay.
Aragtidayada Shakhsiyeed ee Kaydka Safarka
Fadlan ka hel aragtidayada mid kasta oo ka mid ah saamiyada.
BKNG – Marka la eego waa shirkadda safarka ugu weyn adduunka, waxaan kufaraxsanahay Holding Holdings (BKNG).
KHUDBAD – Waxay ahayd in la eryo dad badan intii lagu jiray Covid19 sidaas darteedna dhaqankeedu waa mid jilicsan, markaa aragtidayadu waa Dabiici ku jirta Kooxda Expedia (KHUDBAD).
ABNB – Runtii waxay kuxirantahay qiimeynta, Waxaan aaminsanahay qiimeynta saxda ah ee Airbnb (ABNB) waa inuu noqdaa kala bar qiimaha Kooxda ballansashada (BKNG)
MAR – Waayo, 2021 Waxaan kufaraxsanahay Marriott International (Calaamadda MAR) maxaa yeelay warshadaha safarka waxay arki doonaan kor u kac weyn isla marka safarka la ogolaado mar kale.
SAFAR – TripAdvisor waxay isku dayeysaa inay rogto qaabkeeda dakhliga, iyo guud ahaan waxaan u maleyneynaa in nuxurka uu yahay boqorka TRIP-na uu ku fiican yahay waxa ku jira iyo waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasheeda, waxaan nahay Bullish.
TCOM – Siiyeyntaas Ctrip (TCOM) waa ganacsiga ugu horeeya Shiinaha, waxay ku riyaaqeen soo laabashadii degdegga ahayd ee Shiinaha, si kastaba ha ahaatee, TRIP Group sidoo kale waxay leedahay ganacsi safar caalami ah oo ku raaxeysan doona soo laabashada Safarka, Bullish waa.
MMYT – Way nagu adag tahay inaan talo ka bixinno MakeMyTrip, xiisadaha Shiinaha awgood, laakiin dhinaca togan, Dhaqaalaha Hindiya wuxuu ku jiraa qaab wanaagsan waana inuu noqdaa mid aad u wanaagsan boostada Covid19.
CCL – Kaydka Carnival Cruise ayaa kici doona isla marka uu markabkii ugu horreeyay ku soo laabto xeebta isagoo aan waxyeello gaarin, maalmahan ma foga, ilaa markaa waxaan dabiici ku nahay CCL.
RCL – Royal Carribian waxay aad ugu egtahay Carnival Cruise iyo caadi ahaan labada shirkadood’ natiijooyinka waa isku mid, si kastaba ha ahaatee, kor u kaca RCL wuu ka yaryahay CCL, laakiin sidoo kale halkan waxaan ku sii joogi doonnaa Dabiiciga Royal Caribbean.
RYA – Ryanair waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee miisaaniyadda haddii aysan ahayn, isla marka xayiraadaha Yurub laga qaado, keydkan ayaa aad u kici doona, laakiin xitaa hadda, Waxaan u maleyneynaa in saamigan RYA uu ku fiican yahay faylalkaaga, Bullish.
Waxaan helnaa su'aal guud oo ku saabsan hawlgalka Badbaadinta Tareenka, Save A tareenka runtii waa a website tigidhada tareenka, laakiin sidoo kale waxaan leenahay qayb gaar ah oo blog ah, taas oo gabi ahaanba bilaash ah, waana kaliya kor u qaadista safarka iyo tareenka safarka qaaska ah.
Hadda waxaad aragti fiican ka haysataa qiimeynta iyo macluumaadka kaydka ee shirkadaha safarka, tani uma baahna inay kaa niyad jabiso safarka, iyo markaad samaynayso, fadlan dooro Save A tareenka. sida boggaaga tareenka safraya.
Ma rabtaa in aad Cudarada this page gal goobta, kaliya halkaan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-companies-stocks%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)